Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Fear begets fear in Myanmar: Citizens take on security as Buddhist extremism, violence spread
Fear begets fear in Myanmar: Citizens take on security as Buddhist extremism, violence spread
at 5/03/2013 10:22:00 AM
YANGON, Myanmar — They have seen how the troubles start from the smallest things. They have seen the police powerless before mobs fired with religious zeal and armed with bricks and swords. They have seen on TV and in newspapers the burning homes of people just like them light up the night. And so they have erected rusted barbed-wire barricades and volunteered to sit on street corners, 10 men at time, watching for signs of trouble through the night.
Read more+++click on link
မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲ အပစ်ရပ် ဆက်စပ်သတင်းများ
KBC NI KIO DAT KASA NI HPE MAGUN LIT (74) HTE HKA...
P R E S S R E L E A S E U . S . E M B A S S Y R A ...
ကချင်ဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ်(VOA news)
ပူတာအိုက ကျေက်စိမ်း ထွက်တဲ့ ဆန်ဂေါင် က နေ ရေခဲတောင...
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးကြမ်း နောက်ဆုံးရသတ...
Seven Points Agreement of Myanmar's Union Peacemak...
Sarama Kaba , Yungwi ning hkring Nhpan Ja Ra kawn ...
Myitkyina Simsa Lam Bawngban Hpawng A Mahtai
ကေအိုင်အို တောင်းဆိုချက် လူထုသဘောထားနှင့်ကိုက်ညီ
KNO NDAU SHABRA LAIKA
panglung matut - 70
Jinghpaw Dimogresi Ginrun Patiakyu hpyi garum da...
KIO နှင့် မြန်မာအစိုးရ မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲ ရုပ်...
KIO/KIA ကိုယ်စားလှယ်များအား ကချင်ပြည်သူများ လှိုက်လ...
ဒူဝါ အနေနဲ့ ဗမာ စစ်တပ်ကို ဝေဖန်တဲ့အခါ တချို့က မြန်...
Interview With N Hpan Ja Ra ( part 2)
R.I.P Fr Thomas Gumrai Awng ( Thank you very much ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ဟူးကောင်းဒေသရှိ ယုဇန စီမံကိန...
Lt-Gen N'ban La Awng, Vice-Chairman of KIO intervi...
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၆၉)
Roirip hkrum ai lam ( teng sha byin ai lam)
Myitkyna Na Wunpawng Sha Ni Zuphpawng Sa Ai KIO Ni...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရှောင်လင်ကွန်ဖူးအတတ်ပညာ (RFA) —
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၆၇)
ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ တစ်ရပ်ဖြစ်သော K.I.O
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပြဿနာသည် အစိုးရအဆက်ဆက် သေ...
ဦးသိန်းစိန် ကို လူမျိုးပေါင်စုံမှဆန္ဒပြကြကန့်ကွက် ...
သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပူးတွဲ သတင်...
Kachin Alliance photo
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၆၅)
KIO,ဒုတိယဥက္ကဌ ၊ UNFC အဖွဲ. London ကို ရောက်ရှိ
Bumese in USA Protest President Thein Sein ( click...
၀ါရှင်တန်ရောက် ဦးသိန်းစိန် မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့တွေ့...
ယူနန် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဆန့်ကျင်ရေး (တရုတ်နိုင်င...
A ten du sai
Panglung Matut (64)
MAIGAN KITHKAI NINGTAU LITHKAM DUKABA GAWL LA AUNG...
KIO/KIA HTE MYEN A MAJAN LABAU
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၆၃)
နိုင်ငံရေး ကကြီး ခခွေး
Htawt Shut N-mai Sai Lagaw Lahkam Ni Daw- ( V ).
လက်နက်(တိုင်းရင်းသား) နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပြသာနာ
လက်နက်စွန့်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ခေ တ်အဆက်ဆက်က တိုင်းရင...
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် ၆၂
panglung matut - 61
ကချင်တွေလဲ မြန်မာ ပါ
Panglung Matut 60
17 Lang na USA J/W Hkristan Dinghku dabang de saw ...
၂၀၁၃ နှစ်လည် ပြည်ထောင်စုအရေး သုံးသပ်ချက်
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၅၈)
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် ၅၉
တိုင်းရင်းသား ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖြစ်ရမယ်
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှု အစိုးရဘက်ဝှက်ဖဲ မရှိသင့်
Kachinalam hpe mungkan mungdan shagu hta shapoi ...
pang lung matut-56
Htawt shut n-mai sai Lagaw lahkam ni Daw- (IV )
MTP 1-5-13 စကားဝိုင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတရုံးဝန...
Interview with Kachin Alliance Spokesperson N Sang...
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၅၅)
အခွင့်အရေး မှန်သမျှ သူတို့ပဲ သိမ်းကြုံးယူထားတော့ တ...
ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ အဆက် (၅၄)
panglung matut - 53
Panglung matut -52
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဒေ...
Fear begets fear in Myanmar: Citizens take on secu...
တိုင်းပြည်တပြည်မှာ စစ်တပ်တတပ်တည်း ရှိကို ရှိရမယ်လိ...
ဘာတေးလ်လစ်တနာ (Bertil Lintner) မြစ်ကြီးနား သွားမည်...
MCS Photography in Kachin